Somaliland: Dollarkii Wuxu Marayaa 9000-.
Somaliland: Dollarkii Wuxu Marayaa 9000-.
Sunday March 12, 2017 - 12:35:22 in by Samiir Cabdi
Hargeisa goobaha qaar $1 waxa lagu sarifaa 7500 s/sh halka goobo kalena lagu sarifayo 8500 s/sh, Marka aad adigu dollar rabtona hadaad hesho waa 9000 s/sh!! Kuwan masaajidada ka qaylinayaa maalin qudha Maka hadleen dulmigaa iyo xaaraantaa duhurka cad is dhacayo ee weliba sababta ugu wayn iyaga leeyihiin maadaama inta ugu badan ee bakhaar ama xawaalad. amaba sarifle haysataa iyaga yihiin!!!!!!!!!
Ribada lagu sheegayaa waa baahida qofka oo looga faa’iidaysto. Bal u tag kuwan dalkeena ka furan ee #Islamic_Bank’s ka sheegta ee weliba shareholders kooda ugu waawayn LA yaqaan ragga ay yihiin! Gaadhiga suuqa ku yaal $4000, intay sida dabo-raqleeyada macdarka kuu raacaan oo lacagta bixiyaan ayey adigana ku odhan waxad noo keentaa $4600, sababta $600 lagu saaray waa baahidaadii oo lagaaga faa’iidaystay ileen hadii aadan baahi kuu hayn umaba tagteenee, haday Gaadhiga iyagu hayaan waxay doonaan inay kaa siiyaan xaq Bay u leeyihiin, hadiise Gaadhiga suuqa yaalo xaq Uma leh inay sidaas kaaga faa’iidaystaan waana ribbo shaadh xalaal ah loo geliyey! Waana Barta aan ku haysto #shareholders dhiiga ummadee jaqayaan ku difaacanaya diinta,
Wadaadka maanta dawladda ku haysta xeerka #Comercial_Bank’s maalin qudha maku qabsaday qabyaalada, eexda, musuqa iyo boobka dawladdu ku hayso shacabka waa Maya! Oo muxuu uga hadli waayay dee isagaaba qaybtiisa walaaqanaya!
By: Axmed Bile